ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ (UNHCR) ရုံးရှေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီအပေါ် ထားတဲ့သဘောထားအား ထောက်ခံပွဲနှင့် ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ပွဲ.. ~ ဒီမိုဝေယံ
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ (UNHCR) ရုံးရှေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီအပေါ် ထားတဲ့သဘောထားအား ထောက်ခံပွဲနှင့် ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ပွဲ..
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ (UNHCR) ရုံးရှေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ စုစည်းမိတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီအပေါ် ထားတဲ့သဘောထားအား ထောက်ခံပွဲနှင့် ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ပွဲ..။
(ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲသို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်.. ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်တားမြစ်စဉ်..။ ဆန္ဒပြပွဲအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံချိန် ၅ရက်မပြည့်ခင် ခွင့်ပြုချက်မကျမှီ လာရောက် ဆန္ဒပြတဲ့အတွက် လာရောက်တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်..။ ဆန္ဒပြဲပွဲအား ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်..)
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားအား ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၊ မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်အနီးရှိ UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့တွင် လူငယ် ၂၀ ခန့်က ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ရိုဟင်ဂျာအရေး ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းအား ထောက်ခံခြင်း၊ UNHCR မဟာမင်းကြီး ပြောကြားသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်မည့် အကြောင်းအား ကန့်ကွက်ရှုတ်ရှခြင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများအား မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟု ဖိအားပေးပြောဆိုနေကြသော ပြည်ပမီဒီယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံများအား ရှုတ်ချ ဆန့်ကျင်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၊ မြန်မာပြည်သူ တိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးက ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ညီညီညွှတ်ညွတ် လုပ်ဆောင် ပေးကြပါရန် ၎င်းတို့က တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ““ရိုဟင်ဂျာအရေးပြောကြားသော သမ္မတကြီးအား ထောက်ခံပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်။ လိမ်ညာဝါဒဖြန့် မီဒီယာများ ချက်ချင်းရပ်။ ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားဟု ပြောသူများ အလိုမရှိ””ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်ခံမှမဟုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စုစည်းမိသော လူငယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သတင်း 7Day News Journal
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ - စစ်အမှောင်ခေတ်က ဟာသများ
တိုင်းဒေသ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်ရဲ့ ဇာတိ အင်္ဂပူမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရွေးချယ်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတခရိုင် အင်္ဂပူမြို့ မှာ မြို့ပေါ်(၃)ရပ်ကွက်စလုံး အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ရွေးချယ်ရာ မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူးလို့ သတင်း...
ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ်မှ အိမ်ဖော် ကလေးမလေးအား အိမ်ရှင် ဒုမြို့နယ် တရားသူကြီးဇနီးမှ လူမဆန်သည့်လုပ်ရပ်..
ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်ရဲ့ လူမဆန်စွာ မီးပူဖြင့် အကပ်ခံရတဲ့ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် အိမ်ဖော်မလေး (၂၅...
Top 10 Smart Cities in Southeast Asia Smart cities are flourishing across Southeast Asia. Here we havealist with ten of the most pr...
လောင်းလုံ ရေနံချက်စက်ရုံ စီမံကိန်းအနီးမှ ဒေသခံများ...
တောင်သူလယ်သမား မဟုတ်သူများမှ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငေ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) Website ဖွင့်ပြီ...
အရူးမီးဝိုင်း (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းရုံး သတင်...
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ကြေငြာချက်နှင့် ...
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်စင်တာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြ...
ကမ္ဘာ့ကုန်ကျ စားရိတ် အသက်သာဆုံး လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်...
(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လမ်းမတော်မြို့နယ်) ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ ညီလာခံအောင်မြင်...
ရွှေဝယ်မြေမှ လယ်သမားတို့၏ ရင်ဖွင့်သံ (ပေးစာ)
သိန်းဂရုပ်ဆောက်လုပ်ရေးမှ တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်အား ထိရောက...
ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း မလာမှီ ခါတော်မှီ လမ်းခင်းနေတဲ့...
အမှန်တကယ် မရှိသော ဝန်ထမ်းလစာများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေခြ...
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသား/သူများအား ပြည်ေ...
ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလာ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)၏ တိုကျိုနာရီတာ ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်”(အပိုင်း-၆) ဆောင်းပါ...
အများပြည်သူနှင့် ရခိုင်ပြည်သူများအား ထင်ယောင် ထင်မ...
ငါးဖမ်းလျှောဆည်များကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပြီးမြေများေ...
လမ်းမတော်မြို့နယ် အမေ့အားမာန် စေတနာရှင် ကွန်ရက်မှ ...
နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလာ (ဒယ်အိုးဆရာ...
﻿ UN/INGOs များမှ ရခိုင်ပြည်သူများအား ခွဲခြားဆက...
ပဲခူးတိုင်း၊ က၀မြို့နယ်၊ အုပ်စုကျေးရွာနှင့် လယ်ယာေ...
အကျင့်ပျက် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နြေ...
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ကျူးလွန်နေတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်”(အပိုင်း-၅) ကိုမျိုး ...
ရွှေပြည်သာ ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား NLD ပါတီက ဆန် လှူဒါန...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ဌာနမှူ...
ပအိုဝ်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့အား အဖွဲ ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်”(အပိုင်း-၄) (ဆောင်းပ...
မြိတ်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တနသာ...
နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာေ...
တောင်ကြီးမြို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ ဦးစီးကျင်းပတ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့ ကျင်းပလုပ်ဆောင်ရသည့်...
ပြောရဦးမယ် . . . အဘစိန် ရေ..
ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်...
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်... ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၄-...
မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံေ...
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ...
ပရဟိတ အနုပညာရှင်လူသားတစ်ဦးအား ထုဆစ်ခြင်း ..
၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ...
၈၈၈၈ (၂၄)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရသူ...
၂၄နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာ....
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိ...
စာရေးဆရာ တာရာမင်းဝေ၏ (၅) နှစ်ပြည့် နှစ်ပါတ်လည်...
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ "ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်မျ...
ပြည်တွင်း မီဒီယာအသီးသီးမှ သတင်းသမားများ၏ “မီဒီယာဖိ...
ထူးဆန်းထွေလာ ဟင်္သာတမြို့မှ ဆက်သွယ်ရေးဋ္ဌာန အကြောင်း (...
ထားဝယ်မြို့၌ (၂၄)နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအ...
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ (UNHCR) ရုံးရှေ့မှာ ...
ခေတ်အဆက်ဆက် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတဦး၏ အ...
၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီး အမှတ်တရ ရုပ်သံဖိုင်များ.....
ဘလော့ခ်ဂါ နေဘုန်းလတ်၏ "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့...
ရလလဖ ဥက္ကဌ ဦးတာကလယ် ၏ ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်အခမ်...
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီ(ယာယီ)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်...
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရသူများ အရေး စုံစမ်းရေး ကော်မရ...
သားသတ် လိုင်စင်ဥပဒေနှင့် ပတ်သတ်၍ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတဦး...
MOSA အဖွဲ့ ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် သင်တန်း ပြည်မြို့ တ...
“စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်” (အပိုင်း-၃) ကိုမျို...